Ifulethi e-Buena Vista
I-Apartment Buena Vista iyifulethi elisanda kumiswa elinemibono emangalisayo yoLwandle lweCaribbean. Buqamama iziqongo ezingokomlando zama-Pitons angamawele zingabonakala ngomzila wezindiza wase-Hewannora International Airport ngaphambili. Ifulethi likude nemizuzu eyi-10 ukusuka esikhumulweni sezindiza, okwenza uhambo lwakho lokuya emsebenzini usuka lapho ufika uye ekhaya, lungabi nazinkathazo.
Izidleke ezingomakhelwane zethambeka eliseningizimu-ntshonalanga yeNtaba i-Moule A Chique, ikhaya lendlu yesibani ephakeme kunazo zonke emhlabeni. Woza ujabulele imvelo!
Ifulethi lesimanjemanje, eli-chic imizuzu emi-5 ukusuka enxanxatheleni yezitolo namabhishi anesihlabathi aphumuzayo. Nethezeka futhi ujabulele ukushona kwelanga okuhle ngenkathi uphuza ubhiya obandayo we-Piton!
Ikhishi lesimanje eligcwele ama-granite countertops namakhabethe okhuni oluqinile. Izinto zikagesi zikhethwe ngesandla ukuze zixubane nomhlobiso futhi zonke ZINSHA!!
Igumbi lokugezela liphelele ngompompi wekhanda leshawa yemvula kanye namathayili e-porcelain angashushuluki ngaphakathi nangaphandle kweshawa. I-Shaver/Dryer Outlet iyatholakala eduze kwesitsha sobuso ukuze kube lula kuwe.
Igumbi lokulala elithokomele lihlotshiswe kahle futhi lijabulela ukuphumula kobusuku obuhle emashidini oqalo akhethwe ngesandla. Igumbi lifakwe ifeni yophahla esebenza kahle, kanye ne-inverter ac eyonga amandla (eco-friendly).
Jabulela ukubukwa okumangalisayo (sicela ubone izithombe zokushona kwelanga) kusukela egcekeni njengoba udla ngaphansi kwezinkanyezi noma unquma ukuphuza inkomishi yetiye noma yekhofi ekuseni kakhulu (isici engisithandayo sale ndawo).
indawo enokuthula, kude nokuphithizela kwedolobha eliseduze. Uhambo lokuya emsebenzini olufushane lwemizuzu eyi-10 usuka esikhumulweni sezindiza samazwe ngamazwe.
Jabulela ukugibela intaba ekuseni kakhulu ukuze ubuke ukuphuma kwelanga phezu kwe-Atlantic noma umane uhlale ngaphandle evulandi futhi ujabulele ukushona kwelanga okumangalisayo oLwandle lwe-Caribbean.
sitholakala mathupha, ngocingo kanye ne-imeyili ukuze siphendule futhi sinikeze noma yiluphi usizo oludingekayo.